Flatpak 1.0 inosvika iine seti yezvinhu zvitsva | Linux Vakapindwa muropa
Flatpak 1.0 iri pano ine seti yezvinhu zvitsva
Flatpak yakagadziridzwa kune yayo yazvino vhezheni, umo matinogona ikozvino kumhanyisa kunyorera pasina desktop desktop.
Mamwe mazuva apfuura, Vashandi vekusimudzira kweiyo Flatpak tekinoroji vazivisa kuti yakagadzikana vhezheni 1.0 yakatoburitswa, iyo inouya nezvimwe zvinogadziriswa zvebug uye kunyanya maficha nyowani akawedzerwa.
Zvakare sehunhu hukuru uhwo yakavhurwa mune ino yakagadzika vhezheni yeFlatpak ndiko 'kwakanyanya kuvandudza mukuita uye kuvimbika' inova yakakosha kumberi muFlatpak 1.0.
Kune avo vashandisi vatsva uye vanhu avo handizive Flatpak Ini ndinogona kukuudza kuti izvi zvaimbozivikanwa se xdg-app.
Flatpak chishandiso chekushambadzira software, manejimendi manejimendi, uye mashandiro ekushandisirwa enzvimbo dzeLinux desktop
Zvinobatsira inopa sandbox nharaunda inonzi Bubblewrap, umo vashandisi vanogona kumhanyisa kunyorera kwakasarudzika kubva kune yakasara sisitimu.
Zvishandiso zvinoshandisa Flatpak zvinoda mvumo yemushandisi kudzora zvishandiso zvehardware kana kuwana mafaira emushandisi
Iyo sandbox inokonzeresa kutaurirana kwese pakati peiyo inoshanda sisitimu uye Hardware. Chishandiso chega chega chinenge chiine bhokisi rayo rejecha - izvi zvinowedzera zvakanyanya chengetedzo yeiyo inoshanda system uye inomiririra muchina.
Imwe yemabhenefiti akakosha ePlppak ndeyekuti inobvumidza iyo application kumhanya pane chero (zvingangoita) kugoverwa kweGNU / Linux.
1 Chii chitsva muFlatpak 1.0
2 Maitiro ekuisa Flatpak 1.0 pane akasiyana Linux kugoverwa?
Chii chitsva muFlatpak 1.0
Flatpack 1.0 Inofananidzwa neyekare yakagadzikana imwe (0.10.x) ine yekumhanyisa kumisikidza (uye kugadzirisa) nguva, Inokutendera kuti utare mafomu ari EOL (kupera kwehupenyu), uye inoda kuti vashandisi vasimbise mvumo yekushandisa mushure mekumisikidzwa.
Alexander Larsson, akati:
"Basa rakawanda raenda kuFlatpak 1.0 uye tine chivimbo kuti rakagadzirira kushandiswa zvakanyanya. "Chinangwa chaPlppak chave chiri chekuvandudza iyo ecosystem uye iri danho rakakosha munzira iyoyo."
Pamusoro peizvi tinogona zvakare kuratidza kuti, kutanga neshanduro iyi, kana kunatsurudzwa kwekushandisa kuchida mvumo yekuwedzera iyo yakapihwa pakutanga, ikozvino zvakafanira kuti mushandisi ape imwezve yekusimbisa zvikasadaro iyo yekuvandudza haizopedziswe.
Imwe shanduko yakakosha ndeye kuwedzerwa kweiyo portal nyowani iyo inobvumidza makambani kuti atangezve kuita kwavo kunyorera, zvinobatsira kuti utangezve kushanda mushure mekugadzirisa, kumhanyisa vhezheni itsva uye kudzivirira kusangana nematambudziko.
Iko kugona kumaka kunyorera kunowanikwa muEOL kunobatsira wepakati software (senge iyo GNOME Software Center), iyo inogona nyore kunyevera vashandisi kuisa chishandiso chavasisiri kutsigirwa.
De dzimwe shanduko dzinogona kujekeswa mune ino nyowani yakagadzika vhezheni yeFlatpak 1.0 tinogona kuwana zvinotevera:
Peer-to-peer kuisirwa (kuburikidza ne USB) ikozvino inotsigirwa nekutadza
Zvikumbiro zvinogona kukumbira kupinda kune inomiririra SSH mumiririri kuti uwane maseva ari kure, Git, nezvimwe.
Iko kunyorera kunogona kukumbira mvumo yekuwana zvishandiso zvakabatana neBluetooth.
Dzimwe sarudzo nyowani dzeruzivo dzakapihwa dzakadai se: --show-permissions , --file-access, --show-location, --show-runtime, --show-sdk.
Iwo wekugadzirisa wekuraira unogadzirisa akakanganiswa mapakeji panguva yekuisa.
Zvikumbiro zvinogona kuendesa kunze D-Bhazi masevhisi emazita ese eD-Bhazi avanazvo
Tsigiro yemapakeji eOCI akagadziridzwa kune yazvino vhezheni
Mvumo nyowani yekupa X11 kupinda kana mushandisi ari kumhanya muchikamu cheX11.
Maitiro ekuisa Flatpak 1.0 pane akasiyana Linux kugoverwa?
Kana iwe uchitova nePlppak rutsigiro rwakawedzerwa kune yako system chingovhura package package yekuraira pane yako system.
Kune rumwe rutivi, kana usati wawedzera tekinoroji iyi kune yako system, ivo chete vanofanira kushanyira chinyorwa chinotevera kwatinogovana mirairo yekuwedzera Flatpak kune akawanda maLinux kugoverwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Flatpak 1.0 iri pano ine seti yezvinhu zvitsva